Xarrunta gar gaarka deg dega ee qeybta carruurta ee Östrasjukhuset oo hakad ku yimid | Somaliska
Xarrunta gar gaarka deg dega ee qeybta carruurta ee Östrasjukhuset oo hakad ku yimid
Xarrunta loo yaqaano barnakuten ee cisbitaalka Östrasjukhuset ee magaaladda Göteborg, ayaa habeenimadii xalay aheyd hakad la geliyey addegiisa caafimaad tan iyo saakara arroortii ka dib markii ay soo if baxeen raadka cudurka jadeecadda oo halkaas.
Anne Haglund Olmarker oo qoraal u dirtay asxaabta siyaasadeed ee gobolka ku sheegtay sababta loo xiray qeybta qeybtaasi carruurta ay aheyd qiimeeyn lugu sameeynayey, cudurka halkaasi laga helay raadikiisa yahay mid xowli ku faafa oo halis ah oo u baahan in laga hor tago.
“Ma jiraan sabab ay bulshada guud ahaan uga walaacdo, islamarkaasina shaqsiyaadka uu ku dhacay oo lugu raad joogo” ayey Anne Haglund ku tiri qoraal ay u dirtay asxaabta siyaasadeed ee gobolka Göteborg. Ugu dambeyntii magaaladda Göteborg ee deegaanadda ku teetsan ayaa waxaa ka jira cabsi la xirriirta in cudurka jadeecado ku faafo bulshadda. Bishan horaanteedii shaqsi la sheegay inuu yurubta bari ka yimid oo cudurka jdeecadda qaba tagay xarrunta deg dega ah ee Östrasjukhuset ee magaaladda Göteborg. Wixii intaa ka dambeeyeyna sagaal qof ayaa si rasmi ah oo loo sheegay in cudurkaas ku dhacay.